I-Heechi Tech Limited (Hong Kong)
● Isixazululo sokushisisa se-HNB sesizukulwane esilandelayo: Ukushisisa komoya
● Uchungechunge lokuhlinzekwa kwezimboni oluhlanganiswe kakhulu
● Inqubomgomo yezindleko evumelana nezimo yenza isakhiwo sakho sezindleko siqhudelane kakhulu
● I-heatstick enelungelo lobunikazi eyingqayizivele ye-OEM/ODM
● Isixazululo sokushisisa umoya esinelungelo lobunikazi
● Izinga lokubhaka elingu-90%.
● Intuthu enkulu kune...
● ama-heatstick angama-20 ngenkokhiso ngayinye
● 15 ama-puff i-heatstick ngayinye
● Ulayini wokukhiqiza oguquguqukayo, i-MOQ eguquguqukayo
● OEM / ODM iyatholakala
● Ukwenza i-flavour ngokwezifiso
● Qala ku-$1 iphakethe ngalinye
● Ivolumu ephezulu, intengo ephansi
● Isampula yamahhala nokuthunyelwa
I-HEECHI Group yasungulwa ngo-2015. Le nkampani izibophezele ocwaningweni lwe-HNB (Heat Not Burn). Ngemva kweminyaka ye-R&D, iqembu lobuchwepheshe be-HEECHI selivele linohlelo oluphelele lwempahla yengqondo emkhakheni we-HNB futhi liyakwazi ukukhiqiza uchungechunge lwamadivayisi ngaphansi kokuvikelwa kweqembu elizimele lobunikazi. Le nkampani ihlose ukuhlinzeka ngemikhiqizo enempilo kanye nolwazi olungcono lokubhema kwababhemayo.
Ngo-2008, iqembu lezinto zokwakha kanye noprofesa bonjiniyela bahlangana ukuze bahlole insimu yokushisa futhi bangashi, ukuze bahlole isisombululo esihlanzekile, esinempilo ekushiseni kukagwayi. Ngemva kweminyaka engu-7 yocwaningo nokuthuthukiswa, kwazalwa imishini yokuqala yokushisa umoya engashi. Ngokusungulwa kwenkampani yeqembu, ithimba lethu ligxile ekwenziweni kahle kokuhlangenwe nakho kwemikhiqizo ehlukene kagwayi nogwayi. Njengamanje, i-heatstick efanele imishini yethu isidayiswe emazweni angu-154 emhlabeni jikelele. Ngesikhathi esifanayo, ithimba lethu lomkhiqizo licwengisise izigaba ezintathu, ingqikithi yama-flavour angu-14 we-heatstick, efanelana kahle namadivayisi ethu.
Kungani ukushisa kungashi kunempilo
Ubuchwepheshe be-HNB (ukushisa okungashisi) bunciphisa ukukhululwa kwezinto zetiyela ngokubhaka emazingeni okushisa aphezulu kunokuzishisa ngokuqondile.
Ubuchwepheshe be-HNB (Heat Not Burn) buphinde bunciphise ukukhiqizwa kwetiyela, futhi ukugxilisa okuphansi kwama-carbonyls, ama-VOC, i-CO, ama-radicals mahhala noma ama-nitrosamine uma kuqhathaniswa nogwayi ovamile.
Yehlisa ukuchayeka kwababhemayo ezintweni eziyingozi ezitholakala entuthwini kagwayi, futhi ayikhiqizi intuthu kagwayi futhi inciphisa kakhulu imiphumela eyingozi kagwayi ovamile kuyilapho ugcina ulwazi lokubhema.